खेलकुद – Action Media
कोपा अमेरिकामा ब्राजिलको लगातार दोस्रो जित, कोलम्बिया र भेनेजुएलाले खेले बराबरी
४ असार, काठमाडौं । आयोजक ब्राजिलले कोपा अमेरिकामा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । समूह बी अन्तर्गत शुक्रबार बिहान सम्पन्न खेलमा ब्राजिलले पेरुलाई ४-० ले पराजित गरेको हो । स्टाडियो ओलम्पिको निल्टन सान्तोषमा भएको खेलमा ब्राजlलका लागि एलेक्स सान्ड्रो, नेयमार, एभरटन रिवेइरो र रिचार्लिसनले गोल गरे । पहिलो हाफमा एक गोल गरेको ब्राजिलले दोस्रो हाफमा तीन गोल गरेको थियो । जसमा दुई गोल अन्तिम समयमा भएको थियो । सान्ड्रोले १२औं मिनेटमा गाब्रीएल जेससको पासमा गोल गरेका थिए । यस्तै नेमारले ६८औं मिनेटमा फ्रेडको पासमा गोल गर्दै ब्राजिलको अग्रता दोब्बर पारे । ८९औं मिनेटमा एभरटनले रिचार्लिसनको पासमा गोल गरे । यस्तै रिचार्लिसनले इन्जुरी टाइमा गोल गरेपछि ब्राजिलले सहज जित हात पार्‍यो । लगातार दोस्रो जितपछि ब्राजिल ६ अंकसहित समूह बी मा शीर्ष स्थानमा छ । पेरु भने पहिलो खेलमै पराजित भएको हो । यसैगरी स
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, खेलकुद, बिज्ञान प्रबिधि, ब्यानर पोस्ट, भिडियो, मनोरंजन, राशिफल, रोचक, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
काठमाडौ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष राजु खड्काले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडक तथा ढल निर्माणको कार्यहरु गर्दै आइरहनुभएको छ निषेधाज्ञाका बाबजुद पनि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई सामाजिक दूरी कायम गरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ पासिकोटमा निर्माण कार्याले प्रगति लिएको छ , यस्ता किसिमका कार्यहरू अन्य सरोकारवालाहरुले पनि गर्दै गएमा देशको उन्नति हुन धेरै बेर लाग्दैन । वडा अध्यक्ष श्री राजु खड्का ज्युले यस्ता किसिमका कार्यहरू गर्दै जानुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । थप जानकारीका लागि तल दिएको link क्लिक गरेर भिडियो सहित हेर्न सक्नु हुनेछ । धन्यवाद https://youtu.be/8qL2FXOHvvs
१६ वर्षपछि रामोसले छाडे रियल मड्रिड
३ असार, काठमाडौं । रियल मड्रिडका कप्तान सर्जियो रामोसले डेढ दशकपछि स्पानिस क्लब छाड्ने भएका छन् । रियलले बुधबार डिफेण्डर रामोसले क्लब छाडेको पुष्टि गरेको छ । यस्तै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रामोसको बिदाइ गर्नेसमेत रियलले जनाएको छ । त्यसपछि रामोस भर्चुअल कन्फ्रेन्समा उपस्थित हुनेछन् । सेन्टर ब्याक रामोसको रियलसँगको समझौता यही जुनको अन्त्यमा सकिँदैछ । र त्यसको २ साताअघि उनले क्लबले छाड्न लागेका हुन् । सन् २००५ मा सेभियाबाट रियल मड्रिड पुगेका रामोसले त्यहाँ १६ वर्ष बिताए । रामोसले रियलका लागि ६७१ खेल खेल्दै १०१ गोल गरेका छन् भने ४० असिस्ट समेत गरेका छन् । यस्तै उनले ५ पटक ला लिगा र ४ पटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका छन् । साथै कोपा डेल र २ पटक, क्लब विश्वकप र स्पfनिस सुपर कप ४-४ पटक र यूईएफए सुपर कप ३ पटक जितेका छन् ।
२ असार, काठमाडौं । साविक उपविजेता फ्रान्सले युरोकप २०२० मा विजयी सुरुआत गरेको छ । विश्व विजेतासमेत रहेको फ्रान्सले मंगलबार राति भएको खेलमा आत्मघाती गोलको सहयोगमा जर्मनीलाई १-० ले पराजित गरेको हो । समूह एफ अन्तर्गत जर्मनीको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा डिफेण्डर माट हुमेल्सले फ्रान्सलाई गोल उपहार दिएका थिए । म्युनिकमा भएको खेलको २०औं मिनेटमा फ्रान्सका पउल पोग्बाको पासमा लुकास हर्नान्डेजले क्रस गरेको बल बचाउने क्रममा हुम्ल्सले आफ्नै पोष्टमा गोल गरेक थिए । त्यसपछि खेलमा कुनै गोल हुन सकेन । ग्रुप अफ डेथको रुपमा रहेको समूह एफमा यस जितपछि फ्रान्सले ३ अंक जोडेको छ । त्यसअघि साविक विजेता पोर्चुगलले हंगेरिलाई ३-० ले पराजित गर्दै ३ अंक जोडिसकेको छ । अब अर्को खेलमा फ्रान्सले हंगेरी तथा जर्मनीले पोर्चुगलसँग खेल्नेछ । दुवै खेल जुन १९ मा हुनेछ ।
दुई गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा अर्जेन्टिना कोलम्बियासँग बराबरीमा रोकियो
२६ जेठ, काठमाडौं । सन् २०२२ को कतार विश्वकपको दक्षिण अमेरेकी छनोटमा अर्जेन्टिना कोलम्बियासँग २-२ गोलको बराबरीमा रोकिएको छ । बुधबार बिहान सम्पन्न खेलमा अर्जेन्टिनाले दुई गोलको अग्रता लिएर पनि कायम राख्न सकेन । कोलम्बियाले इन्जुरी टाइममा गोल गर्दै खेल बराबरी गरेको थियो । खेलको तेस्रो मिनेटमा क्रिस्टियन रोमेरोले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए । आठौं मिनेटमा लिन्ड्रो डानिल पारेडेसले गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाले २० मिनटभित्रै २-० को अग्रता बनायो । तर पहिलो हाफको यो अग्रतालाई दोस्रो हाफमा निरन्तरता दिन सकेन । ५१ मिनेटमा लुइस मुरिएलले पेनाल्टीमा गोल गर्दै कोलम्बियालाई खेलमा फर्काए । इन्जुरी टाइममा कोलम्बियाका मिगुएल बोर्जाले गोल गरेपछि अर्जेन्टिना जितबाट बन्चित भयो । छनोटमा अर्जेन्टिनाको यो लगातार दोस्रो र समग्रमा तेस्रो बराबरी हो । अपराजित अर्जेन्टिना ६ खेलमा १२ अंक जोड्दै
१७ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२२/एएफसी एसियन कप २०२३ को संयुक्त छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणको बाँकी खेल खेल्न नेपाली फुटबल टोली कुवेत पुगेको छ । इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टोली उतैबाट कुवेत गएको हो । नेपाल आइतबार कुवेत पुगेको हो । त्यहाँ नेपाली टोलीको पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाव संकलनसमेत भएको छ । शनिबार भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल इराकसँगको ६-२ ले पराजित भएको थियो । नेपालका लागि अन्जन विष्ट र मनिष डाँगीले गोल गरेका थिए । कुवेतमा नेपालले छनोट चरणका बाँकी तीन खेल खेल्नेछ । नेपालीले जेठ २० गते चाइनिज ताइपेइ, जेठ २४ गते गते जोर्डन र जेठ २८ गते अष्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । कोरोना महामारीले गर्दा नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नु पर्ने यी खेलहरु एएफसीले सेन्ट्रल भेन्युको रुपमा कुवेतमा खेलाउन लागेको हो । यसअघि ५ खेल खेलिसकेको नेपालले १ जितबाट ३ अंक जोडेको छ र समूहमा प
डेब्यूमै कुशल भुर्तेलको अर्धशतक
४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेलले टी–२० अन्तर्राष्ट्रियको डेब्यु खेलमै अर्धशतक प्रहार गरेका छन् । त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजको उद्घाटन खेलमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध डेब्यू गरेका उनले अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् । डेब्यु खेलमा ओपनिङको जिम्मेवारी पाएका उनले आक्रमक ब्याटिङ गरेका थिए । अर्का डेब्युटान्ट आसिफ शेखसँगै ओपनिङ गरेका कुशलले ३० बलमा ५ चौका र ४ छक्का मद्दतमा अर्धशतक पूरा गरे । कुशलले यसअघि सिनियर टिमबाट लिस्ट ए खेलेपनि टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो पटक खेलेका हुन् । यसअघि सन्दीप जोराले सन् २०१९ मा टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यूमै युएईविरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेका थिए । टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालका लागि पूर्व कप्तान पारस खड्काले सर्वाधिक ५ अर्धशतक प्रहार गरेका छन् । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र विकेटकिपर ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारीले २–२ तथा सुवास खकुरेल र सन्दीप जोराल
सँगम भण्डारी फेरि खरो बनेर आइन मिडियामा , कलाकारहरूको भयो पर्दा*फास ।Sangam Bhandari Interview
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, खेलकुद, बिज्ञान प्रबिधि, ब्यानर पोस्ट, भिडियो, मनोरंजन, राशिफल, रोचक
सँगम भण्डारी फेरि खरो बनेर आइन मिडियामा , कलाकारहरूको भयो पर्दा*फास ।Sangam Bhandari Interview Click the lik for full video ! https://youtu.be/tl3f4e6V4XE
१९ चैत, काठमाडौं । सोमबार सम्पन्न त्रिदेशिय कप फुटबलको उपाधि जितेका फरवार्ड भरत खवास र गोलकिपर विकेश कुथु के गर्दै होलान् ? खेलप्रेमीको जिज्ञासा स्वभाविक हो । उनीहरू यतिबेला अर्को खेलको तयारीमा लागिसकेका छन् । त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब (टीएएफसी) का यी दुई खेलाडी एएफसी कपको खेलका लागि तयारीमा लागेका हुन् ।आर्मीले २५ चैतमा घरेलु मैदानमा श्रीलंका पुलिससँग एएफसी कप २०२१ को प्रिलिमिनरी राउण्डको खेल खेल्दैछ । गत सिजनको ए डिभिजन लिग मछिन्द्र क्लबले जिते पनि एएफसी क्लबले लाइसेन्स प्राप्त गरेकोले आर्मीले उक्त अवसर पाएको हो । आर्मी क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली क्लब बनेको छ । जसले गर्दा ए डिभिजन लिगमा उपविजेता भए पनि आर्मीले यो अवसर पाएको छ । एएफसी कपको समूह चरणका पुग्न आर्मीले प्लेअफका खेलहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि घरेलु मैदानमा हुने पहिलो खेल महत्वपूर्ण छ । ‘एएफसी क
इटालियन सिरी ‘ए’ एटलान्टाको फराकिलो जित
काठमाडौँ- इटालियन सिरी ‘ए’ फुटबलमा एटलान्टाले फराकिलो जित निकालेको छ । शुक्रबार राति भएको खेलमा एटलान्टाले स्पेजियालाई ३-१ गोलले हरायो । एटलान्टाको जितमा मारियो पासालिसले दुई गोल गरे । यस्तै लुइस मुरिएलको नाममा एक गोल रह्यो । स्पेजियाका रोबर्टा पिकोलीले एक गोल फर्काए । जितसँगै एटलान्टा २७ खेलबाट ५२ अंकसहित लिगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ ।स्पेजिया २६ अंकसहित १६औँ स्थानमा छ ।
Sambandha Ma Sanka | सम्बन्धमा शंका New Song 2077 (916)
कर्म प्रती बफादार ईन्जिनियर निरज शाक्य । (592)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (517)
डेब्यूमै कुशल भुर्तेलको अर्धशतक (465)
शेर बहादुर डिसी को निर्देशनमा “ सम्बन्धमा संका “ भिडियो सहित । (404)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (403)
अर्जुन थापाको निर्देशनमा “मुटु भरिको माया “ भिडियो सहित । (373)
चीनको अन्तरिक्ष रोबोट मंगल ग्रहमा अवतरण (372)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (355)
Nepal Covid-19 tally: 7,587 PCR, 73 antigen new cases and 55 deaths in 24 hours (347)
जगदम्बा स्टिल उद्योगमा आगलागी, दुई जना मजदुरको मृत्यु
एक सातामै तोडियो बेलिङहमको कीर्तिमान, क्यास्पर बने युरोकपमा सबैभन्दा कान्छो खेलाडी
महाकाली नदीमा बाढी : निर्माणाधीन पुलको बाँध बगायो, ८ घर डुबानमा